News Collection: के के हुँदैछ माओवादी विस्तारित बैठकमा ?
के के हुँदैछ माओवादी विस्तारित बैठकमा ?
बैठकअघि वाइसीएलले गरेको मार्चपास हेर्दै माओवादीको केन्द्रीय नेतृत्व। वाइसीएललाई माओवादीले शिविरबाहिरको लडाकु शक्तिको रुपमा लिएका छन्।
भोजराज भाट, पालुङटार, मंसिर ६- माओवादीको विस्तारित बैठकको बन्द सत्र आज बिहान नौ बजेदेखि सुरु भयो। बन्द सत्रको सुरुमा उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले बोल्ने त्यसपछि खानाको लागि समय छुट्याइनेछ। खानापछिको सत्रमा उपाध्यक्ष मोहन वैद्य र अन्तिममा पुष्पकमल दाहालले विचार राख्‍ने कार्यक्रम छ।
१३ वटा भूगोल राज्य समिति, लडाकूका ७ वटा डिभिजनलाई राज्यसमितिसरहको मान्यता दिइएकोले लडाकूका तर्फबाट ७, वाईसीएलको एक, प्रवास ब्युरोको एक, केन्द्रीय ब्युरो राज्य समिति, सांस्कृतिकका तर्फबाट एउटा राज्य समिति, नयाँ प्रवेश गरेकाहरुको एक र छुटपुट एक गरी माओवादीका कूल २६ वटा राज्य समिति छन्।
बन्द सत्रको पहिलो दिन तीन जनै नेताले आ-आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेपछि बाँकीका चार दिनमा यी २६ वटै राज्य समितिमा प्रत्येक राज्यसमितिबाट तीन जनाले आफ्नो विचार राख्‍नेछन्।
यसअघि तीन नेताका प्रतिवेदनलाई प्रत्येक राज्य समितिमा समूह बनाई छलफल गर्ने तयारी भएको थियो। तर यसो गर्दा बहुमत र अल्पमतको कुरा आउने र त्यसबाट पार्टीमा विभाजन हुनसक्ने भन्दै स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिको बैठकले समूहगत रुपमा छलफल नगर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसको साटो प्रत्येक राज्य समितिबाट तीनै विचारधारालाई समेट्ने तीन तीन जना प्रतिनिधिले बोल्ने छन्। २६ वटा हलमा चार दिनसम्म यो क्रम चल्नेछ।
१४ सयभन्दा बढी लडाकू सहभागी-
अरु दल र अन्मिनले आपत्ति जनाए पनि माओवादी विस्तारित बैठकमा १४ सयभन्दा बढी लडाकु सहभागी छन्। माओवादीका प्रत्येक राज्यसमितिमा उत्तिकै संख्यामा प्रतिनिधि भने छैन। नयाँ राज्यसमितिमा ५० जनाको संख्यामा प्रतिनिधि छन् भने कोचिला राज्यसमितिमा ४ सयभन्दा बढी संख्यामा प्रतिनिधि छन्। त्यसैगरी लडाकुका सात राज्यसमितिमा पनि प्रत्येकमा १०० देखि ३०० को हाराहारीमा प्रतिनिधिहरु छन्।
यसरी तीनै विचारधारालाई समेटेर बोल्दा अरु राज्य समिति सरह लडाकुको राज्य समितिमा कसरी बोल्ने भन्ने बारे अन्यौल छाएको छ। अध्यक्षविरुद्ध लडाकुले बोल्दा त्यसको गलत सन्देश जान सक्ने भनिएकोले लडाकुका ७ राज्यसमितिबाट बोल्ने २१ जनाले तीन वटै विचारधारालाई समेटेर नबोल्न पनि सक्छन्।
बाबुराम भट्टराई र मोहन वैद्य पक्षधरहरुले लडाकुको अनुशासन र चेन अफ कमान्डमा असर नपर्ने गरी विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन नहुने तर्क गरेका छन्।
अनि आउने छ अन्तिम दस्तावेज-
४ दिनसम्म राज्यसमितिहरुमा भएको छलफलपछि मंसिर ९ गते पाँचौँ दिन समापन समारोह हुनेछ। यो दिन पहिले मोहन वैद्यले त्यसपछि बाबुराम भट्टराईले आफ्नो विचार राख्‍नेछन्। अन्तिममा सबै प्रतिवेदनलाई समेटेर अध्यक्ष दाहालले निचोडपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत गर्नेछन् र त्यही दस्तावेजले नै माओवादीले आगामी दिनमा लिने रणनीति तय गर्नेछ।